ပြည်သူများ၏ သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကြောင့် မြဝတီမြို့၌ စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ်များဖမ်းဆီး - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဩဂုတ် ၁၄-ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့မှ ပြည်သူများ၏ သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကြောင့် မြို့တွင်းရပ်ကွက်များရှိ လမ်းများပေါ်၌ စည်းကမ်းမဲ့ရပ်နားထားသော မော်တော်ယာဉ်များအား ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ဩဂုတ် ၁၃ ရက်ညနေ ၃ နာရီကစတင်ဖမ်းဆီးရာ စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် ၁၈ စီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကာစစ်ဆေးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကျော်သူရည်ဦးဆောင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှတ်(၇၃) ယာဉ် ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်ဟန်ကိုကိုဝင်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ယာဉ်အ ထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြို့နယ်စည် ပင်ယာရေးကော်မတီမှ ဒု/ဦးစီး မှူးပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ၏ သတင်းပေးတိုင်ကြားချက် အရ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်တွင်းရှိ မဉ္စူလမ်း၊ စကားဝါးလမ်း၊ စိန်ပန်း လမ်း၊ ခရေလမ်း၊ ဂန္ဓမာလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းတို့တွင် စည်း ကမ်းမဲ့ရပ်နားထားသောမော် တော်ယာဉ်များအား ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့သည်။
“”ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပြည်သူ တွေသတင်းပေးတိုင်ကြားလာတာ ကြောင့် အခုလိုအဖွဲ့စုံပူးပေါင်းပြီး ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်တွေအများစုဟာ စည်းကမ်းမဲ့ရပ်နားတာကြောင့် မော်တော်ယာဉ်တွေ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သလို လမ်းထောင့်တွေမှာရပ်ထားတဲ့ ယာဉ်တွေ၊ နှစ်ထပ် သုံးထပ်ရပ် ထားတဲ့ယာဉ်တွေကြောင့် မလို လားအပ်တဲ့ယာဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ် ကြရတယ်။ ဒါကြောင့်ယာဉ်စည်း ကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့မညီညွတ် တဲ့ယာဉ်တွေကိုစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာကြဖို့ အခုလိုပညာပေး ဆောင်ရွက်တာပါ””ဟု မြို့နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကျော်သူရည်က ပြောသည်။
ဩဂုတ် ၁၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီ က စတင်ဖမ်းဆီးရာ စည်းကမ်းမဲ့ မော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်း ၁၈ စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး အဆိုပါမော်တော် ယာဉ်များအား မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်း စည်းကမ်း ဥပဒေပုဒ်မ ၆၅ ဖြင့်အမှုဖွင့်အ ရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပါက ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေးကန်များ နစ်မြုပ်နိုင်သဖြင့်ကြိ?
အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ အမျိုးသမီးများကို အိမ်တွင်း၌သာနေရန် တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေဟုဆို
ဗိုလ်တထောင် ကျိုက်ဒေးအပ် စေတီတော်ကြီးတွင် ကျပ်သိန်း ကိုးသောင်းခန့် အကုန်အကျခံပြီး လုံးတေ??
ကော့သောင်းမြို့အနီး မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း စက်လှေတစ်စင်းပေါ်မှ ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၃ဝ ကျော်တန်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်သော်လည်း စိုးရိမ်ရမည့် အချိန်??